Dhallaanka kelinimada ku yimaada oo laga dul qaadey heshiiska Dublin - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Dhallaanka kelinimada ku yimaada oo laga dul qaadey heshiiska Dublin
La cusbooneeyay fredag 7 juni 2013 kl 11.14
La daabacay fredag 7 juni 2013 kl 09.36
Wikström: Ma jiro iminka waddan go'aankaa ku xad-gudbi kara
Maxkamadda EU oo go'aamisay in dhallaanka kelinimada ku yimaada laga dul-qaado xeerka Dublin. Sawirle: Scanpix
Dalka Iswiidhen wuxuu safka hore kaga jiraa waddammada ey magan-gelyada ka dalbadaan qaar badan oo ka mid ah dhallaanka aaney la socon waalidkii ama cidii masuuulka ka ahayd. Iyadoona mararka qaarkood dhallaankaa dib loogu celin jirey waddammo ka mid ah EU-da, sida uu qorayo heshiiska Dublin. Iyadoona mararka qaarkood dhallaankaa dib loogu celin jirey waddammo ka mid ah EU-da, sida uu qorayo heshiiska Dublin. Haddaba maxkamadda Midowga Yurub ayaa dhowaantan go’aamisey inaan dhallaanka kelinimada ku yimaada waddamada xubnaha ka ah ururka Midowga Yurub aanu qaban doonin heshiiska Dublin iyo in lagu celiyo dalkii ey horraantii iska soo dhiibeen laga diiwaan-geliyey. Mana jiro waddan iminka tallaabadaa qaadi kara, sida ay sheegtay Cecila Wikström, kana mid ah xubnaha baarlamanka ururka EU-da:
Sida uu qabo heshiiska caalamiga ee waddammada ku bahoobey ururka midowga Yurub (EU) ee Dablin ayaa qeexaya in ajaaniibta magan-gelyada u timaadda waddammada xubnaha ka ah ururka ey xaq ugu leeyihiin in arrinkooda lagu falanqeeyo, hadba dalka ugu horeeya oo ey soo caga-dhigtaan. Hase yeeshee iminka shaki laga muujiyey inuu heshiiskaasi qabto dhallaanka keli-nimada ku yimaada waddammada EU-da.
War-bixinnadii la xiriiraey wiil loogu magac-daro Cali oo 15-jir ah oo ay laanta wararka ee Ekot warar fara badan ka sii deeysay ayaa ka careeysiiyey dadyoow badan. Hase yeeshee ey xaaladda dhallaanka keli-nimada ku yimaada ey isku khilaafsanaayeen waddammada xubnaha ka ah EU-da iyo heshiiska hagaya ee Dublin, kolkii ey dhowaantan wada-xaajooneyeen amuurtaa waddammada xubnaha ka ah iyo baarlamanka EU-da.
Hase yeeshee ay middaa maxkamadda EU-du ka gaartay go’aan oronaya in dhallaanka keli-nimaa ku yimaadaa yihiin koox uu saaran yahay culeeys gaar ah. Sidaa daraadeedna aan loo diri karin waddan kale ee xubin ka ah ururka EU-da.
- Aad iyo aad ayaan ugu farax-sanahay. Muddo ayaan middaa halgan ugu soo jiray. Ma ahan inaan dhallaanka u kala waaridno waddammo kala duwan. Mana ahan wax ku habboon sharafta waddammada xubnaha ka ah ururka midowga Yurub, sida ay sheegtay Cecilia Wikström, kana mid ah xubnaha xildhibaannada baarlamanka EU-da u matala xisbiga Shacabka ee FP.
Dhallaanka keli-nimada ku yimaada waxey xaq u leeyihiin in arrintooda lagu qaado dalka ey hadba ku sugan yihiin. Go’aanka maxkamadda ee ee toddobaadkan la gaaey ayaa quseeya saddex dhallaan ah ee dacwad ka gudbiyey in magan-gelyadooda lagu qaado dalka Ingiriiska.
Halka uu go’aanka maxkamaddu uu dhanka kale carrabka ku adkeeyay in aan go’aankaasi macnihiisu ahayn in cid diidmo ku heshey dalabkeedii aaney u safri karin waddan kale ee xubin ka ah EU-da si mar kale ay magan-gelyo uga codsato haddii aaney soo bixin arrimo hor leh ee wax ka bedeleya dalabkiisii hore.
Illaa hadda ayey dalkan Iswiidhen magan-gelyo doon ku soo galeen sannadka dhallaan keli-nimo ku yimid oo gaarsiisan 1 200. Iyada oo 14 ka mid ah dhallaankaa uu ciidanka ammaanku dib ugu celiyey waddammo xubno ka ah EU-da si dalabkooda halkaa loogu qaado. Go’aanka maxkamadda ayaa haddaba noqon doona mid hor-istaaga falalka dhallaanka dib loogu celineyo.